Kyle Walker oo ka warbixiyay waxa kaliya ee ka dhiman Manchester City si ay ugu guuleysato Champions League – Gool FM
Kyle Walker oo ka warbixiyay waxa kaliya ee ka dhiman Manchester City si ay ugu guuleysato Champions League
Dajiye July 28, 2019
(Yurub) 28 Luulyo 2019. Daafaca kooxda Manchester City ee Kyle Walker ayaa sheegay in kooxdiisu ay u baahantahay nasiib wanaag si ay ugu guuleystaan Champions League.
Dhinaca kale Kyle Walker ayaa sheegay in kooxda Sky Blues uu ugu biiray si uu ugu guuleysto koobab badan.
Hadaba shabakada caanka ah “Sky Sports” ee dalka England ayaa waxay shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Kyle Walker waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Markii aan ka tagay Tottenham oo aan la saxiixday kooxda Manchester City, waxaan u imid inaan ku guuleysto koobab, waxaan ku guuleysanay koobka horyaalka Premier League, laakiin ma doonayo inaan joojiyo, waxaan doonayaa inaan ku guuleysano markeena saddexaad iyo sidoo kale tartanka Champions League”.
“Waxaad u baahantahay inuu nasiibka ku saacido si aad ugu guuleysanto Champions League, ma ahan sida horyaalka oo kale, hadii aad guuldareysato wareegyada bug baxda kulanka hore, waxaad ciyaari kartaa kulan labaad si aad guul u gaarto”.
“Nasiibka ma uusan na saacidin dhawaanahan, laakiin tani cabasho ma noqoneyso, waan aqbalnay sida ay haatan xaaladu tahay, waana inaan horey u soconaa”.
Manchester City ayaa laga ciribtiray tartanka Champions League xili ciyaareedkii lasoo dhaafay, kaddib markii ay isku darka labadii kulan ee wareega afar dhamaadka ay ku kala bexeen kooxda Tottenham Hotspur 4-4, waxayna ku hareen “Away Goal” ama goolka martida.
Sky Blues waligeed taariikhda kuma guuleysan tartanka Champions League, iyadoo la ogsoon yahay in guusheedii ugu fiicneyd ay gaarto ay ahayd u soo bixitaanka wareega semi-finalka ee tartanka Champions League afar xilli ciyaareed kahor, kahor inta aysan Real Madrid ka cirib tirin.
Danny Welbeck oo ku dhibtoonaya inuu helo koox cusub oo uu u ciyaaro & Mushaarkiisa oo u sabab ah
Maxaa burburiyey heshiiskii uu Franck Ribery xagaagan ugu biiri lahaa kooxda uu aadka ugu dhowaaday ee Liverpool?